Lahatsoratra nataon'i Scott Hardigree ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Scott Hardigree
Tsy ny domaine intsony no sehatra anaovan'ny mpanonta be. Ny avolava sy ny dolara marketing dia avily lalana mankany amin'ny tafika mpamoaka vaventy kely; na mpiambina afa-po, bilaogera, mpitoraka bilaogy, na podcasters. Noho ny fitomboan'ny fangatahana, ireo mpampanonta bitika ireo dia mitady fomba tsara ahazoana tombony amin'ny mpihaino azy ireo, sy ny ezak'izy ireo. Tombom-barotra amin'ny Gazety amin'ny mailaka Miaraka amin'ny paikadim-bola ampiasain'izy ireo ankehitriny, toy ny dokam-barotra mampiseho ny tranokala sy ny fanohanan'ny haino aman-jery sosialy, manokana anio
Jery ​​Insider momba ny hoavin'ny lozisialy sy serivisy marketing amin'ny mailaka
Alakamisy, Desambra 1, 2011 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Scott Hardigree
Iray amin'ireo tombony azo amin'ny fiainana sy miaina ny indostrian'ny akany, toy ny fiasan'ny maso ivoho mailaka, ny fanomezana fotoana iray hisaintsainana izay mety hitranga amin'ny ho avy. Ity manaraka ity dia fahitana amin'ny ho avy ny amin'ny ho fahitana ny marketing amin'ny mailaka amin'ny taona 2017 ho an'ny mpampiasa, ny mpivarotra ary ny mpanjifa. Niova haingana ny anaran'ny lalao enin-taona ary ny teny hoe "marketing amin'ny mailaka" dia nanjavona tanteraka tamin'ny fitenintsika. Na dia ambany aza
Alakamisy, May 27, 2010 Alarobia, Novambra 5, 2014 Scott Hardigree
Ho an'ireo mpivarotra izay te-hitrandraka volamena betsaka kokoa avy amin'ny programa mailaka; Ny marketing amin'ny mailaka ivelany dia mahazo vahana haingana. Mitady serivisy marketing mailaka tantanina izy ireo satria sorena sy mitandrina. Moa ve misy dikany aminao ny fandefasana dokambarotra mailaka amin'ny mailakao?
Alakamisy, Aprily 29, 2010 Sabotsy, Oktobra 20, 2018 Scott Hardigree
Hatramin'izao dia nanomboka (fa tsy mbola nahavita) drafitra fandraharahana mahazatra am-polony aho. Ka matetika aho dia manome elatra azy fotsiny miaraka amin'ny "drafitra fandraharahana", saingy mangataka mangingina aho fa nanokana fotoana hamaritana ireo paikadiko maharitra sy fohy amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nandrafitra drafitra fandraharahana hita maso aho.
Ireo consultant amin'ny marketing amin'ny mailaka amin'ny ankapobeny dia manana endrika telo; izy rehetra ireo dia manana fahaiza-manao sy traikefa izay manokana amin'ny famolavolana paikady marketing amin'ny mailaka mahomby. Na izany aza, miovaova be ny fahaizany sy ny tolotra omeny. Ka mila consultant mailaka ve ianao? Raha eny, karazana inona? Apetraho amin'ny tenanao ireto fanontaniana manaraka ireto.